စံဝင်းချို Daily Hope The Source of Real Power
“စိတ်နူးညံ့သိမ်မွေ့သော သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ထိုသူတို့သည်ပြည်တော် ကိုအမွေခံရကြလတံ့။” (မ ၅း၅)
သင်၏အသက်တာတွင်ခြားနားချက်လုပ်ခြင်သလား၊ဒါပေမဲ့ဟိုကို ရောက်နိုင်ပုံမပေါ်? သင်သည်အခြေအနေ ပြောင်းတာကြည့်ခြင်သလား၊ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ပုံမပေါ်? သင်သည် တကယ်ရှိသောတန်ခိုးဘယ်မှာရှာ၍၊ သင်၏အသက်တာတွင် တကယ်ပြောင်းလဲမှုကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
သခင်ယေရှု သင်ကြားတာကတော့ တကယ်ရှိသောတန်ခိုးသည် ထူးဆန်းသော၊ အများစု မျှော်လင့်မထားသော နေရာ။ တကယ်ရှိသောတန်ခိုးသည် သည်းညည်းခံတတ်သောနေရာတွင်တွေ့မည်။
ယခုသည်းညည်းခံတတ်သော၊ သို့မဟုတ် နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊အကြောင်းကိုပြောလျင်၊ ကျွန်တော်တို့ ဂရုစိုက်ပြီးစဉ်စားသည် တခုခု ချိုသော နှင့် နူးညံ့သိမ်မွေ့သော သိုးကလေးလို သို့မဟုတ် ခလေးငယ်လေးလို။ ဘုရားသခင်၏အဘိဓာန်တွင်၊ သည်းညည်းခံတတ်သောသည် ပျော့ညံ့သည်မဟုတ်ပါ။ အဓိပ္ပါယ်သည် “တန်ခိုးသည် ထိန်းချုပ်မူအောက်တွင်ရှိသည်။”
‘’ဒီလိုစိတ်ကူးသည် ဒုံးပြန်လွှတ်တင်သလို။ သင်သည်တူညီသော လောင်စာစွမ်းအင်ကိုပေါက်ကွဲ အောင် ဖန်တီးလျှင်၊ ဒုံးလွှတ်စင်ကိုပျက်စေသည်။ ဒါပေမဲ့ထိုလောင်စာစွမ်းအင်ကိုသေချာသောမီးခိုးခေါင်းတိုင်မှ စေလွှတ်ပါက။ ဒုံးပြန်သည်ကမ္ဘာအပြင်ဘက် အာကာသ ဟင်းလင်းပြင်သို့တက်သွားပေမည်။
ဘုရားသခင်ကသင်၏အသက်တာတွင်ပြုလုပ်စေလိုသည်။ ဘုရားသခင်ကသင်၏စကား၊ ခံစားမူ နှင့် တိုက်တွန်းမှုတို့တွင်ရှိသော တန်ခိုးကို ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိစေခြင်သည်။ ဒါပေမဲ့သင်၏ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ သင်၏အသက်တာအတွက်ရွေးချယ်နိုင်သည့် နည်း (၃) နည်းရှိသည်။
၁။ ထိန်းသိမ်းမူမရှိသောအသက်တာ။ ဤကဲ့သို့နေထိုင်ခြင်းသည်၊ သင်၏ပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးကိုပျက်စီးစေ သည်။ ယင်းသည်ပေါက်ကွဲနိုင်သော၊ ဒေါသအများအပြား၊ ဆီစဉ်ရန်အရေးကြီးချက်၊ ဖျက်ဆီးသောအင်အား နှင့် စည်းကမ်းမဲ့သော လုပ်ဆောင်ချက်။ အမြင်အားဖြင့်အများဟာဖြစ်ပျက်နေသည်။ သို့သော်လည်းနေရာ တိုင်းတွင်ပျက်စီးရန်ဦးတည်ပေးနေသည်။
၂။ ထိန်းသိမ်းမှုရှိသောအသက်တာ။ ဤကဲ့သို့နေထိုင်ခြင်းသည်၊ သင်၏အသက်တာရှိ ကဏ္ဍတိုင်းကိုကြိုးစား ၍ ထိန်းချုပ်လိုသည်။ ဤကဲ့သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းသည်၊ သင်ကိုပင်ပန်းစေခြင်းနှင့်ဖိစီးမှုပေးခြင်းတို့ကိုရရှိပြီး၊ သဘောပေါက်မိစေတာကတော့၊ အရာရာကိုစစ်ဆေး၍မရနိုင်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်။
၃။ ဘုရားသခင်၏ထိန်းသိမ်းမှုအောက်ရှိအသက်တာ ဤကဲ့သို့နေထိုင်ခြင်းသည် သင်သည်ဘုရားသခင် ပေး ထားသော ကိုယ်စွမ်း ဉာဏ်စွမ်း ကိုယူ၍အသုံးပြုပြီး၊ ပြန်လည်ပေးအပ်သည်။ မိမိဘာသာလုပ်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းပြီး။ ဘုရားသခင်၏ထိန်သိမ်းမှုဖြင့်ဆိုလျှင် သင်အသုံးပြုသောနည်းများသည်၊ သင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမည်ဟု မထင်ခဲ့သောနည်းများလဲပါဝင်ပေမည်။
အသက်တာတွင် ဘယ်နည်းဖြင့်နေထိုင်ခြင်းသည် အကျိုးများသောနေထိုင်ခြင်းဖြစ်မည်နည်း? ကျွန်တော်တို့၏ သက်တာကိုဘုရားသခင်၏ထိန်းသိမ်းမှုအောက်သို့တင်ပြလျှင် အကျိုးအမြတ်အသီးအပွင့်၊ ပေါလု ဂလာတိ ၅း၂၂-၂၃ပြောသလို ထွက်မည်။
“၀ိညာဉ်ပကတိ၏အကျိုးမူကား၊ ချစ်ခြင်း၊ ၀မ်းမြောက်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ စိတ်ရှည်ခြင်း၊ ကျေးဇူးပြုခြင်း။ ကောင်းမြတ်ခြင်း၊ သစ္စာစောင့်ခြင်း၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊ ကာမဂုဏ်ချုပ်တည်းခြင်းပေတည်း။ ထိုသို့သောအကျင့်ကို အဘယ်တရားမျှ မမြစ်တား။”
Tuesday June 07, 2011 12:00AM Posted by Tom Holladay